Leica C-Lux အသစ်ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းနှင့် 1 လက်မအရွယ်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော super zoom ကို | Gadget သတင်း
Leica C-Lux အသစ်ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းနှင့် 1 လက်မအရွယ်အာရုံခံကိရိယာအသစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း zoom
Ruben Gallardo | | ဓာတ်ပုံ
မှန်ပါသည်၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများ၏ဈေးကွက်သည်စမတ်ဖုန်းများကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ သူတို့အိတ်ကပ်၊ ကျောပိုးအိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ထဲတွင်သူတို့နေရာမလောက်ပါ။ သို့သော်နှစ်ခုသယ်ဆောင်ရန်ရှိခြင်း ပစ္စည်းတွေ အထက်မှာလူတိုင်းဆန္ဒရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ရလဒ်? ငါ "အားလုံးတ ဦး တည်းအတွက်" နှင့် voila ယူပါ; ဆိုလိုသည်မှာအသိဉာဏ်ရှိသောမိုဘိုင်း။
သို့သော်ကုမ္ပဏီများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမော်ဒယ်များကို ဆက်၍ လောင်းကြသော်လည်းမိုဘိုင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည် ဆု ဘာပဲကမ်းလှမ်းလို့မရဘူး နောက်ဆုံးရောက်လာရန်မှာ Leica ကို C-LuxLeica ကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကဲ့သို့ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူကင်မရာအပြင်သင်သွားလေရာရာ၌သင်၏သစ္စာအဖော်ဖြစ်ရန်အရည်အသွေးကောင်းများပါရှိသည်။
Leica C-Lux ကိုမတူညီသောအရိပ်နှစ်မျိုးဖြင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ရွှေသို့မဟုတ်အပြာ။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်းရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရလဒ်ကောင်းများကိုဆိုလိုသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ စတင်ရန် ၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာ 1 လက်မဖြစ်ပါတယ်; ဆိုလိုသည်မှာကိတ်မုန့်ကို Sony သို့မဟုတ် Panasonic ကဲ့သို့သောပြိုင်ဘက်ပုံစံများနှင့်အငြင်းပွားလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် ဓာတ်ပုံများကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံး resolution သည် 20 megapixels ဖြစ်သည်.
Leica C-Lux တွင် ၁၅ ဆတိုးမြှင့်ခြင်း၊ built-in flash ကိုကမ်းလှမ်း; အနောက်ဘက်တွင် ၃ လက်မနှင့် multi-touch တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ် ဦး ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပြင် ၂.၃ သန်းမီလီမီတာ resolution resolution ဖြင့် LCD viewfinder။ ဒီအကြောင်းနောက်ထပ်ဘာပြောနိုင်သေးလဲ။ ကောင်းပြီ, ဆက်သွယ်မှုအစိတ်အပိုင်းအတွက် Bluetooth နဲ့ Wi-Fi နှစ်ခုလုံးရှိမယ်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူ တက်ဘလက် ဒါကြောင့်နီးပါးမဖြစ်မနေပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
Leica C-Lux ၏ဗွီဒီယိုအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအနေနှင့်၎င်း၏မော်ဒယ်လ်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိစေလိုလျှင်၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး resolution ကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ဒီ 4k ကလစ်များနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဈေးကမသက်သာဘူး။ နောက်လာမယ့်ဇူလိုင်လမှာရောင်းမယ် 1.050 ဒေါ်လာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » ဓာတ်ပုံ » Leica C-Lux အသစ်ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းနှင့် 1 လက်မအရွယ်အာရုံခံကိရိယာအသစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း zoom
Galaxy Note9ကို 512 GB သိုလှောင်မှုပမာဏဖြင့်စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ယခုအပတ် raffling သော Rowenta Smart Force Essentials များထဲမှအနိုင်ရရှိ!